राम्री युवतीलाई कसरी आकर्षित गर्ने ? यस्ता छन् उपायहरु ! – Complete Nepali News Portal
December 12, 2016	49,038 Views
भनिन्छ नि, ‘मान्छेको बोलीले नै उसको भविश्यको बाटो तय गर्छ ।’ यो भनाइ यसमा पनि लागू हुन्छ । हुन सक्छ कि कुनै युवतीको मनमा तपाईंको लागि केही भावना उठिरहेको छ । तर तपाईंको बोलीका कारण उसले तपाईंलाई टाढा राख्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसर्थ युवतीसँग बोल्ने क्रममा आफ्नो वाणीलाई नियन्त्रित राख्दै सोचेर बोल्नुहोस् । मिडिया एनपीबाट